Madaxwaynaha Koonfur Galbeed oo Arin la yaab ku Noqotay Xildhibaanada ka sheegay Muqdisho | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Sep 29, 2020 - 9 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo ka qeyb-galay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday xildhibaanada baarlamaanka, siiba kuwa ka soo jeeda maamulkaasi.
Lafta Gareen ayaa shaaciyey in xildhibaanada qaar looga xaq lahaa kuraasta ay ku fadhiyaan, taas oo lama filaan ku noqotay xildhibaano badan.
ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaan ay jiraan dad u soo dhintay oo mudan in lagu qadariyo ehelladooda, sida uu hadlka u dhigay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ma carab baabin kuraastaasi , balse wuxuu tilmaamay in ay jiraan dad u soo dhintay oo mudan in lagu qadariyo ehelladooda, sida uu hadlka u dhigay.
“Kuraastaan qaarkood dadka u fadhiga waa looga xaq leeyahay, dad baa u dhintay, waa in la qadariyo laguna xushmeeyo ehelkooda, xitaa waxa aan heynaa in kuraasta qaarkood in xaq weyn ku leeyihiin dad nool, nin waliba waa in lagu ixtiraamo waxa uu ahaa.” ayuu yidhi Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen).
Sidoo kaled wuxuu intaasi sii raaciyey “Is cafiskaan waa mid adduunyada iyo aaqiradeena u fiican, marka hore idinka wada shaqeynayay iyo guddoonkiina in aad is cafisaan, ninba si ayuu wax u arkayay, waa la kala qaybsanaa iyada oo xilal lakala raadinayo, waa in aan wada galnaa hal qaanad oo ah digil iyo mirifle oo ku adag dadka kale in ay galaan hal qaanad oo ay ku mideysan yihiin.”
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo haatan uu gaba-gabo yahay muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana ay xildhibaanadu isku diyaarinayaan inay aadaan doorasho, si ay markale ugu soo tartamaan kursiga xildhibaanimo ee beeshooda.
Eebow adiguba waxaa Kursiga Bay iyo Bakool laguugu iibiyey $5 million oo Canshuurtii Eedo Batuulo ah.
Waxaan maqlijirey wiilkaa waxaa loo iibiyey GURIGII Cuddu deganayd si uu ugu tahriibo.
Hadda Laftagareen waxaa loo iibiyey Kursiga Bay iyo Bakool.
* Farmaajo oo Khaatumo aqoonsadey
qabaa’ilka oo dhammi xulafaysigaas bay ku bilaameen markii xigayna odaybaa nawada dhalay bay yidhaahdeen, laakiin adinka daacad baad tihiin halkii baad taagan tihiin..
Waa daanyeernimadi uu Cadaado sheegi jirey, ninkii dadkii uu cunay ay lugahoodi Ka soo jeedaan baa waxuu leeyahay hebel waa dadqal.
Raxanwayn,waa Hawiye Adeerkood.Sidaa waxaa yidhi Lafta Gareen.
Isagu wuu iska kaftamayay,laakiin waaa wax run ah oo ay somalidu ku soo dhaqantahay.
4-ta Reer Hebel iyo Adeerkood.
Been run laga dhigay.
Madhibaan burburay,Muuse dhariyo kala yaacday iyo Ybirk kala guuray.
Jareerka waa Kamasle Hawiye
Cadcadku,waa Caddaan Hawiye.
Raxanwayna waa Hawiye Adeerkood.
Hadaba waa imisa Ila Hawiye.
Kablalax Daaroodbaa quustay.
Horta aan ku kala Baro reer Koofureedka
Raxanweyn waa labo qeybood.
1. Digil waa dadkii ka harey boqortooyadii
Ajuuraa, ( Geledi iyo Garre iyo qabiiladii ka horyimid dagaalkii Hiraab iyo Ajuuraan) sida Asharaaf, Murusade, silcis, xaskul,
2. Mirifle – waa geelay, waxaana ku jiro qabiilkasto oo Soomaali ah
Ninkaan Lafta gareen wuxuu ka hadlahayaa
Kursiga adeerkiis SHAATI- Gaduud oo laga yaalo inuu ku fadhiyo nin asalkiisu tahey Qabiilada kale.
Waa bogaadinayaa MR. LAFTA-GAREEN.. waayo, waxaa uu ka waaliyey kuraastaas wax la yiraahdo HAAWEYDA HAWIYEE..
Inta ku harsan ee HAAWEYDA HAWIYE, hilfaha waa in loo qaada…
Dhulkaan, waxaa iska leh:
++ DIGLOO MIRIFLE
++ BIYO MAAL
++ JAREER WEYNI
MOORIYAANTA wali ku sugan beeraha dadka SOOMAALIYEED ee HAWIYE, waa in la qaxiyaa, sidii ay dadka uga qaxiyeen MUQDISHU…
Xaq ma jidho, ilaa lagu soo koobo HAAEYDA HAWIYE, dhulka ay SOOMAALI WEYN ka leeyiheen..
MR. LAFTA-GAREEN, dadka uu la hadlaayo, waxaa weeyee, xildhibaanada HAAWEYDA HAWIYEE, oo ugu horeeyo MR. CABDULLAHI XASSAN..
VIVA CABDULCASIIS LAFTA GAREEN…
Markii la jebiyey boqortooyadii Ajuuraan ee ka talinjirtey HOBYO ilaa Kismaayo
( only Dhulka Gaal iyo Muslim, Dictator iyo Democracy KA TALIYEEN).
Waxey ku qasbanaadeen Qabiiladii ku hoos noola Boqortooyadii Ajuuraan, iney wada noqdaan NEW HAWIYE
SORRY, waxaan hilmaamay DAAROOKII ee BARDAALEE..
OGAADEEEEEEEEN IYO MAJEERTEEN (BURAASHADLEEEEY)..
Dabshid oo yaa jabiyey boqoryooyadii juuraan?
Qarniga casriga ah waxaa shaweeya boqortooyada Majeerteen oo dhul dad dhul xukunta ah..kkkkk
Soo gaar boqortooyada dhul xukumo ah, …
What the fuck s boqortooto!!!!
MUUQAAL: Gaadiidka, Hubka iyo Rasaata ay dagaalka ku Qabsatay Azerbajain
Istanbul ( Kalshaale ) Gaadiidka, Hubka iyo Rasaata ay dagaalka ku Qabsatay Azerbajain
Madaxwayne Trump oo Qaatay Go’aan Farxad wayn Gelin doona Dalka Suudaan
Nairobi ( Kalshaale ) Donald Trump Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Suudaan uu ka ...
Shiinaha iyo Taiwan oo Xiisada ka dhaxaysa ay Isku Bedeshay Gacan ka hadal
Muqdisho ( Kalshaale ) Xiisadaha mudada dheer ka dhex taagnaa Shiinaha iyo Taiwan ayaa ...
Doorashada Maraykanka oo Meel kulul Maraysa iyo Waxa kala haysta Trump iyo Biden
Nairobi ( Kalshaale ) Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump iyo ninka kula loomamaya Aqalka Cad, ...
Madaxwayne Farmaajo oo ka hadlay Xukuumadda Cusub ee RW Rooble iyo Codsiga uu Baarlamaanka u diray
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku ...